Ghana · Marsa, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Ghana · Marsa, 2018
Tantara mikasika ny Ghana tamin'ny Marsa, 2018
Ny Tohin'ny Dia Tany Accra
Mediam-bahoaka13 Marsa 2018
Indro ny rakipeo lava kokoa nohavaozina tamin'ny diako tany ho any Ghana tany. Fisaorana manokana an'i Alula Records noho ny namelany ahy hampiasa mozika avy amin'ny mpihira Ghaniana Obo Addy. Hasongadiko ny sanganasan'i Obo sy ny lahatsary amin'ny rakipeo manaraka . -andy
Ghana: Mpanenon-damba ao Ashanti
Lahatsary fohy mikasika ny fanenoman-damba nentim-paharazana kente ao amin'ny faritra Ashanti ao Ghana.
Toy Ny Ahoana Izany Hoe Nandeha Fiarakodia Nandritra Ny Telo Ora Niampy Nofy Ratsy Fito Ora ?
Mediam-bahoaka12 Marsa 2018
Rakipeo voalohany : manodidina ny tany amin'ny 7:15 hariva, tany ho any amin'ny faritra avaratr'i Accra tany. Rakipeo faharoa : adiny roa taty aotiana teo ho eo , somary efa akaiky kokoa an'i Accra, saingy mbola lavitry ny toerana rehetra manakaiky ny faran'ny dianay
Ghana: Resadresaka Momba Ny Rakipeo Sy Ny Bilaogin-dahatsary Tao Amin'ny Radio Ghana
Mediam-bahoaka01 Marsa 2018
Nanadihady ahy tao anatin'ny antsafa ny mpanao gazety iray avy ao amin'ny Radio Ghana nandritra ny atrikasa notontosaiko. Nihaino fampahalalam-baovao maro matetika aho kanefa tsy reko izany ary nihevitra aho noho izany fa tsy nahatratra ny fotoana nandefasana izany angamba na tsy mbola nalefa mihitsy ilay izy.